Kiiskii ugu horeeyay ee Coronaha cusub oo laga helay dalka Maraykanka - Home somali news leader
Home NEWS Kiiskii ugu horeeyay ee Coronaha cusub oo laga helay dalka Maraykanka
Wararka ka imanaya dalka Maraykanka ayaa sheegaya in kiiski ugu horreeyay oo la xiriira nuuca cusub ee cudurka COVID-19 ee maalmahan ka jiray dalka Ingiriiska, ayaa shalay marki ugu horreysay laga helay dalka Mareykanka.
Qofka laga helay fayraskan ayaa ah nin dhalinyaro ah oo ku jira da’da labaatameeyada, waxana hadda lagu karantiilay dhinaca koofurbari ee magaalada Denver.
Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, wiilkani ayaanan u safrin meel ka baxsan Mareykanka.
Sheybaarka Waaxda Caafimaadka gobolka Colorado ayaa xaqiijiyay kiiska cusub ee la xiriira cudursidahan. Sheybaarka ayaa arrintani ogeysiiyay Xarunta Kahortagga iyo Xakameynta Cudurrada ee dowladda Federaalka Mareykanka.
Guddoomiyaha gobolka Colorado, Jared Polis ayaa ku dhawaaqay kiiskani cusub isaga oo sheegay in si hoose ay ula socon doonaan fayraskaan. Wuxuu intaasi raaciyay in hadda aan xanuunkani wax badan laga aqoonin balse ay dhaqaatiirta u sheegeen in uu si dhaqso ah u fidi karo.
Saynisyahannada dalka Britain oo marki ugu horreysay xanuunkani helay ayaa rumeysan, in xawaaraha uu ku fido cudurkaan uu ka dheereeyo marka loo fiirayo cudurksidaha Caronavirus.
Previous articleFormer US spy Pollard is welcomed by Netanyahu when he arrives in Israel
Next articleThe leaders of the European Union formally sign a British trade agreement after Brexit